३ बर्षसम्म लिभिङ टुगेदरमा बसेकी शिक्षीकालाई ‘पहिलो श्रीमानकै बच्चा हो’ भनेर दोस्रो श्रीमानले छोडिदिएपछि…. (भिडियो हेर्नुस्) – Dainik Sangalo
३ बर्षसम्म लिभिङ टुगेदरमा बसेकी शिक्षीकालाई ‘पहिलो श्रीमानकै बच्चा हो’ भनेर दोस्रो श्रीमानले छोडिदिएपछि…. (भिडियो हेर्नुस्)
August 10, 2020 665
काठमाडौ । निशा पौडेल काठमाडौको टोखामा बस्छिन् । उनको सानो एउटा छोरा पनि छ । उनलाई श्रीमान भिमसेन भण्डारीले ल्याएर त्यही कोठामा ल्याएर छोडेका हुन् । उनलाई चैतको १० गतेवाट सम्पर्क गरेका छैनन् । उनीहरुले दुई जनाको समझदारीमा विवाह गरेका थिए । प्रेम विवाह भएको उनीहरु तीन वर्ष संगै बसे । उनी वाउन्सर हुन् । उनी ठमेलमा काम गर्छन । श्रीमानको अर्को श्रीमती पनि छन् । निशाको पनि दोस्रो विवाह हो ।
निशाको पहिलो श्रीमानसंग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ । तर उनका श्रीमान भिमसेनले निशाको सन्तान आफ्नो नभएको आरोप लगाएका छन् । सुरेन्द्र खड्कासंग पहिला विवाह भएको थियो । उनले सम्बन्ध विच्छेद छिटो गर्न सुझाव दिएकै कारण सुरेन्द्रसंग सम्बन्ध विच्छेद गर्न आफै निवेदन दर्ता गराएको बताएकी छन् ।
सुरेन्द्रसंग पनि ९ महिनाको प्रेम सम्बन्ध पछि घरमा आएर मागेर विवाह गरेका थिए । १७ वर्षको उमेरमा उनीहरुको विवाह भएको थियो । तर पछि निशालाई कुटपिट गर्न थालेपछि सम्बन्ध विग्रियो । उनी त्यसपछि उनी घरमा गएर बसिन् । त्यहाँ माध्यमिक तह सम्म पढाउने शिक्षिका थिइन् । घरमा निकै त ना व भएपछि उनीहरुबीच सम्बन्ध विच्छेद भएको बताइन् ।
उनले सुरेन्द्रसंग सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै उनको भिमसेनसंग भेट भइसकेको थियो । तर अहिले बच्चा जन्मिएपछि भिमसेनले त्यो बच्चा आफ्नो होइन भन्दै आरोप लगाउन थालेका हुन् । उनले भिमसेनले आफुलाई विवाहित भनेर भनेका थिएनन् । तर उनले त्यतीबेला आफुले उनलाई विवाहित होलान् भन्ने नसोचेको बताइन् । एक जना बच्चालाई दाईको छोरा भनेर भिमसेनले चिनाउँदा पनि उनको विवाह भयो होला भन्ने आफुले नसोच्नु गल्ती भएको उनले बताइन् । तर पछि आफुले पठाएकै बच्चा श्रीमानको छोरा हो भन्ने थाहा पाएको उनको भनाई छ ।
उनले एउटा पार्टीवाट फर्किदा भिमसेनले होटलको रुममा ल्याएर छोड्ने बहानामा आफ्नौ कोठामा बसेको र त्यसपछि उनीहरुबीच सम्बन्ध स्थापित भएको बताइन् । उनले भिमसेनसंग सम्बन्ध सुरु भएको डेढ महिना पछि नै आफु गर्भवती भएको उनको भनाई छ ।
Prevकहालीलाग्दो बन्यो ब्राजिल, अस्पतालका कोठादेखि सडक पेटीसम्मै शव
Nextबँदेल मा’र्न था’पेको ध’रापमा परी दाजुभाइको मृत्यु, बुबा घाइते
छोरीको आँखा उपचारका लागि आर्थिक सहयोग माग